अमेरिकाले जिस्काएपछि एक्सनमा उत्रने चीनको तयारी !
Home #अमेरिका अमेरिकाले जिस्काएपछि एक्सनमा उत्रने चीनको तयारी !
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ३:५७
काठमाडौं। अमेरिकाको बाइडेन सरकारले अर्को महिना ‘लोकतन्त्र सम्मेलन’को लागि ताइवानलाई पनि आमन्त्रित गरेको छ ।
बाइडेन सरकारको यो कदम चीनलाई क्रोधित पार्ने बन्न सक्छ । यसै महिना राष्ट्रपति बाइडेनको साथमा भर्चुअल बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका थिए कि ताइवानलाई स्वतन्त्र देश मान्ने अभियान आगोसँग खेल्नुजस्तै हुन सक्छ ।
ताइवानमा एक निर्वाचित सरकार छ तर चीन उसलाई आफ्नो अंग भन्छ । बाइडेनले सत्तामा आएपछि अमेरिका वैश्विक नेतृत्वको भूमिकामा फर्किने बताएका थिए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आमन्त्रण सूचीमा ११० देशको नाम छ । यो सम्मेलन ९ देखि १० डिसेम्बरमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा विश्वभरमा लोकतन्त्रलाई बढावा दिने र मानवअधिकारको सुरक्षाका विषयमा कुरा हुनेछ ।
यो सूचीमा चीन र रुसको नाम छैन । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ताइवान यसमा सहभागी हुनेछ । ताइवानका डिजिटल मन्त्री एन्ड्रयु तांगले भने ‘हाम्रो देशलाई लोकतन्त्र सम्मेलनमा बोलाइनुले हाम्रो देश वर्षौंदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारका विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने बताउँछ ।’
चीनले पछिल्ला दिनमा ताइवानका विषयमा कडाइ गर्दै कुनै पनि देशले ताइवानसँग सम्बन्ध नबढाउन भनेको छ । ताइवानले भने चीनलाई आफ्नो मामिलामा बोल्ने अधिकार नभएको बताएको छ ।
अमेरिकाले भने वन चाइना पोलिसीलाई मान्न बन्द गरेको छैन । वन चाइना पोलिसी अन्तर्गत ताइवान चीनको अंग हो जबकि पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले ताइवानसँग स्वतन्त्र रुपले द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने कोसिस गरेको छ ।
बाइडेनले ताइवानको यथास्थितिमा कुनै पनि एकतर्फी परिवर्तन अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने पनि बताएका थिए । लोकतन्त्र सम्मेलन भर्चुअल हुनेछ । नेपाललाई पनि अमेरिकाले यो सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि निम्ता दिएको छ ।
अमेरिकाले पाकिस्तान र इराकलाई पनि बोलाएको छ । टर्कीलाई अमेरिकाले बोलाएको छैन जबकि टर्की नेटोको सदस्य हो । मध्यपूर्वबाट इजरायल र इराकलाई मात्र बोलाइएको छ । अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार साउदी अरब, मिश्र, जोर्डन, कतार र युएइलाई बोलाइएको छैन ।
भारतले डिसेम्बर १५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्ने, चीनसहित १४ मुलुक परेनन्